Abubakar Shekau: Koox sheegtay in uu geeriyooday hoggaamiyihii Boko Xaraam | Radio Hormuud
Abubakar Shekau: Koox sheegtay in uu geeriyooday hoggaamiyihii Boko Xaraam
Hoggaamiyihii kooxda maleeshiyaadka ee Boko Xaraam, Abuubakar Shekau ayaa is dilay, sida laga soo xigtay cod ay soo duubeen maleeshiyaad Islaami ah oo uu dagaal kala dhexeeyo kooxdaas.
Maxaa lagu sheegay codka lasoo duubay?
Codka oo aanan la ogeyn xilligga lasoo duubay ayaa waxaa loo maleynayaa in uu yahay hoggaamiyaha garabka la baxay dowladda islaamka ee galbeedka Afrika (Iswap ) Abu Muscab Al Barnawi oo sheegayo "In Abuubakar Shekau oo isagu si deg deg ah uu isku qarxiyay kadib markii uu isku xiray waxyaabo qarxa."
Dagaalyahanada Iswap ayaa baacsanayay dagaal oogaha isla markaana siiyay fursad ah in uu ka tanaasulo fikraddiisa si uu ugu biiro kooxda, ayaa lagu yiri codka laga soo duubay Al Barnawi.
"Shekau ayaa doorbiday in iska takhaluso intii uu isaga lagu bahddili lahaa dunida" ayaa lagu yiri codka.
Bishii la soo dhaafay markii uu soo ifbaxay wararka la isla dhexmarayay ee ku aadan geerida Abuubakar Shekau, militeriga Nigeria waxay sheegeen in arrintaas ay baarayaan.
Maxamed Yerima oo ah afhayeen u hadlay militeriga Nigeria ayaa xilliggaas BBC u sheegay in militeriga ay baarayaan waxa dhacay balse aysan ka hadli doonin tan iyo inta laga xaqiijinayo geerida Shekau.
Weriye xiriir dhaw la leh laamaha amniga ayaa sheegay in Abuubakar Shekau uu geeriyooday markii kooxda Iswap ay weerar ku qaadeen saldhigyada Boko Xaraam ay ku lahaayeen keymaha Sambisa waqooy bari Nigeria.
Marar badan, waxaa la tebiyay in uu geeriyooday Abuubakar Shekau.
Waa kuma Abubakar Shekau?
Shekau oo heysto qori xilli uu ku sugnaa goob aanan la garaneyn oo ku taalla Nigeria
Intii uu hoggaaminayay Boko Xaram, waxay kooxda fuliyeen weeraro loo adeegsaday bambaanooyin, falal afduub ah iyo nin ay maxaabiis si xoog ah uga soo sii daayaan xabsiyada, sanadkii sanadkii 2014 waxay kooxda bilowday olole ay ku qabsanayaan magaalooyinka si shareecada Islaamka ay halkaas ugu soo rogaan.
Abuubakar Shekau ayaa la rumeysan yahay in uu jiray da'da 40, wuxuu kasoo dhex muuqanayay muuqaallo uu uga hadlaya ololaha kooxda.
"Waxaan ku raaxeystaa dilka sida aan ugu raaxeysto marka aan gowracayo digaagta ama Idaha" ayuu yiri mar uu kasoo muuqday muuqaal la baahiyay 2012-kii.
Tan iyo markii uu hoggaanka kooxda la wareegay, in ka badan 30,000 qof ayaa ku dhimatay weerarada halka in ka badan 2 malyan oo qof ay guryahooda ka qaxeen.
Kooxdan ayaa si weyn looga hadal hayay caalamka kadib markii 2014 ay boqolaal gabdho ah ka afduubteen iskuul ku yaalla degmada Chiboka ee gobolka Borno, waxaana bilowday olole lagu baadigoobayo gabdhahaasi oo in badna oo ka mid ah ay wali maqan yihiin.
Wixii xilliggaas ka dambeeyay, Mareykanka wuxuu ku dhawaaqay in Shekau uu yahay 'argagixiso caalami ah', waxaa uu dul digay madaxiisa $7 milyan oo doolar.
Abuubakar Shekau wuxuu dagaal dhiig badan uu ku daatay ka waday waqooyi bari Nigeria in ka badan 10 sano, waxaana ka hor yimid ururka la baxay dowladda Islaamka ee Galbeedka Afrika maadama uu ahaa nin aad xagjir u ah.
Maxay ku dambeyn doontaa Boko Xaraam?
Haddii la xaqiijiyo geerida Shekau, waxaa laga yaaba in kooxda ay soo afjaranto, sida ay sheegayaan falanqeeyayaasha gobolka.
Kooxda la baxday dowladda Islaamka garabkooda galbeedka Afrika ayaa dagaal adag kula jira kooxdan.
Dadka qaar waxay saadaalinayaan in geerida Abuubakar Shekau ay horseedi doonto in uu soo afjarmo dagaalkii kooxdan kala dhexeeyay Iswap taas oo laga yaabo in dagaalyahanada Boko Xaraam ay ku biiraan ururka la baxay dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika halka dad qaar ay sheegayaan in dagaalyahanada ay weli kusii dhagnaani doonaan fikradihii Shekau.